ခြေခေါက် – Thet Nandar
February 23, 2011 Thet Nandar
8 thoughts on “ခြေခေါက်”
take care ma nandar
Thank You June ဆေးသောက် ဒဏ်ကျေဆေးလူး ပတ်တီးစည်းထားလို့ သက်သာနေပါပီ။
ဒါပေမယ့် အိမ်မှာ သားသား ပတ်တီးစည်းထားတဲ့ ခြေထောက်ကို ခလုတ်လာတိုက်မှာပဲ ကြောက်နေတာ။
wish u get well soon.
take care n haveagood rest…sis
Thank you Theingi.
အသိတစ်ယောက် ကလေး ချီထားရင်းနဲ့ လှေကား ၂ဆင့်ကနေ နောက်ပြန် ပြုတ်ကျတာ။ ခလေးက ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ သူ့ကတော့ ခါးရိုးကျိုးသွားတယ်လေ။ so sad.
နားရက် မရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အစစ သတိထားနေရတာ အပြင်
ဘုရားရှေ့ မေတ္တာပို့ နဲ့ ၂၄ ပစ္စည်းလေး ရွှတ်ဖို့ပြောပြပေးချင်တာပါ။
take care mama.. i am your regular blog reader..
online diary reader လေးတွက Fairy လေးတွေပဲနော်။
ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက် Thank you ပါ။
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်လည်းအခုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်ကနေစင်ကာပူပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှလှေခါးအဆင်းမှာခြေခေါက်သွားလို့ တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်။ အခုသက်သာသွားပေမယ့်အဲ့ ဒိနေရာကတော့ရောင်နေတုန်းဘဲ……
စနိုးမားမားရေ …. သတိရတယ် သိလား။ စနိုးလေးကော။ စနိုးမားမားကိုကော အမ အခုရက်ပိုင်း အရမ်းကို သတိရနေတာ။ အစစ အဆင်ပြေပါစေနော်။ Fighting စနိုးမားမား Fighting …..
ခြေခေါက်သွားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့ပါ။ ခြေခေါက်တာက တခါတရံ သိပ်ပီး စိုးရိမ်စရာ မရှိပေမယ့်လို့။ အခန့်မသင့်ရင် အရိုးကျိုးတာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်တတ်တယ်။
ငယ်တုန်း သိပ်မသိသာပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဒဏ်ဖြစ်တယ်လေ။
အဲဒါကြောင့် စနိုးမားမား ဒဏ်ကျေဆေးလည်း လူးပေးပါ။ ဆေးလည်း သောက်ပေးပါ။
အမဆို နှိပ်တာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဇက်ကြောပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှိပ်တာ မတပ်ရင် အရိုး အတက်လေးတွေ ထွက်လာပီး အရိုးကျီးပေါင်းတက်တယ်လေ။
ကြောက်တယ် စနိုးမားမားရေ … အသက်ကြီးလာရင် ဟိုရောဂါ ဒီရောဂါ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ၄၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက အထူး ဂရုစိုက်နေတာ။